Sina Shina vaovao fonosana fonosana vehivavy tovovavy lava faritany Koreana zipper mifanohitra loko miloko be kofehy be fonosana kitapo finday finday Factory sy mpamatsy | Sansan
Fametaka aforitra 2 vody
Fomba fanokafana zipper
Ny firafitra anatiny amin'ny kitapo kely zoro tsipika, volavolan-dalàna, slot karatra, takelaka miafina, fanovana kely
Singa malaza hanjairana
Length Medium sy lava
Color manga, mainty, mavokely
Ny lanjan'ny vokatra 0.18kg
Haben'ny vokatra 19.5 * 9.5 * 2.5cm
Mirefy 7,4 santimetatra x 3,7 santimetatra x 0.9 santimetatra (eo ho eo ny 19 cm x 9.5 cm x 2,5 cm) ary milanja 210 grama.
Namboarina tamin'ny alàlan'ny filokana karatra banky 8, slot amin'ny banknote lehibe, slot 1 zipper mba hitahirizana ireo firaketana manan-danja, ary ny takelaka miafina 2. Mampiasa snaps metaly avo lenta, mateza. Ny velaran'ny kitapo dia voaravaka metaly volamena miloko, matevina sy mamirapiratra ary tsara tarehy. Ny efitrano malalaka dia afaka mitazona ny carte de crédit, volavolan-dalàna, faktiora, finday ary zavatra hafa kely.
Mety amin'ny fety, miantsena, hetsika asa aman-draharaha ary maro hafa.
Io no safidy tsara indrindra ho an'ny fianakaviana sy ny namana.
Previous: Kitapo vehivavy kitapo mamirapiratra kitapo lava be mifanitsy loko loko kitapo poketra
Manaraka: Kitapo fitehirizana Colorblock
Ny poketran'ny kitapo fonosana fonosan'ny lehilahy lava ...
Kitapom-pivarotana lehilahy lava sectio manintona lehilahy ...
Fivarotam-bidy mafana rano miampita sisintany PU mitondra kitapo ...